Zidane oo ka hadlay mustaqbalka xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez – Gool FM
(Madrid) 20 Luulyo 2019. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay mustaqbalka xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez, kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka tagayaan garoonka Santiago Bernabéu inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa soo xigtay hadalada Zidane kaddib shir jarraa’id uu ka soo muuqday wuxuuna ka hadlay mustaqbalka labadan xiddig:
“Tani ma ahan wax dhibaato ah, ma sheegi karo inay jirto dhibaato xiddig kasta ee kooxda ah, wax walba waa ay dhici karaan, Gareth Bale wuxuu heystaa heshiiska uu ku joogo kooxda, waan arki doonaa waxa dhaca, ma jiraan wax isbadal ah ee ku aadan dhanka Bale tan iyo bishii June”.
Yeelkadeeda, axaa jira warar ku aadan in Real Madrid ay dooneyso inay iska iibiso xiddiga reer Weles ee Gareth Bale, sababa la xiriira hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedkiisa iyo dhawaacyadiisa oo noqday kuwo joogta ah.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Real Madrid ay dooneyso in Gareth Bale ay ku iibiso qiimo dhan 80 milyan oo euros, balse waxaan wali jirin koox xiiseeneysa inay kula saxiixato xiddigan reer Weles qiimaha ay dul dhigtay Los Blancos, halka Bale uusan dooneynin inuu ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu, haddii uusan heleynin mushaar la mid ah kan uu haatn ka qaato Real.
Dhinca kale Zinedine Zidane ayaa wuxuu ka hadlay arrinta ku saabsan James Rodríguez, kaasoo la filayo inuu u dhaqaaqo Atletico Madrid maalmaha soo socda.
“James waa ciyaaryahan ka tirsan Real Madrid, wuxuu hada ku jiraa fasax, mana sheegi karno wax kale”.
“Waxaan rajeynayaa in Neymar Jr uu yimaado kooxda Real Madrid” - Marcelo
Frenkie de Jong oo shaaca ka qaaday xiddiga inta ugu badan caawiyay tan iyo markii uu yimid Barcelona